Bilaogeran-dahatsary manerantany nifaninana hahazo ny BOBs (fizarana 2) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2018 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny 31 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitsidika ireo bilaogin-dahatsary avy amin'ny sasantsasany tamin'ireo voafantina hifaninana BOBs, ilay lokan'ny Bilaogy Tsara Indrindra (Best of Blogs) nokarakarain'ny Deutsche Welle isika tao amin'ny lahatsoratra teo aloha. Ato amin'ity fizarana faharoa ity dia ho hitantsika hoe iza tamin'ireo bilaogeran-dahatsary hafa manerana izao tontolo izao no voafantina ary iza no hosafidian'ny mpifidy rehefa manapa-kevitra ny hifidy izay ankafiziny izy ireo!
Ao amin'ny Ginantonic i Gina Tost , Espaniola bilaogeran-dahatsary, bilaogera sady mpandray rakipeo. Nandefa lahatsoratra momba ny diany, ny fiainany izy, ary nanao antsafa niaraka tamin'ireo olo-malaza, ary efa namoaka lahatsoratra hatramin'ny taona 2004 rehefa nanomboka ny bilaoginy tamin'ny teny Katalana izy, fitenim-paritra iray any Barcelone. Noraketiny tao amin'ny “Mi Primer Bicing” ny traikefany voalohany izay tafiditra ao amin'ny Tambajotra Barcelona Bicycle.
Ny Videoblog do Trajano dia bilaogin'ny baolina kitra avy amin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena José Trajano avy any Brezila, izay nahafantarana bebe kokoa momba ny heviny manokana.
Avy any Frantsa, manana bilaogin-dahatsary arahana tononkalo sy zavakanto i Loiez Deniel, ny Poésie des désirs en désordre. C'est la cri$e dia mampatahotra sy mampiseho ny fihetsik'ireo alika tamin'ireo mpitsidika izay maka sary ery amin'ny sisin'ny fefy, ny sasany faly mivovò sy mampihetsiketsika ny rambony, ny hafa manatona haingana sy mitrerona ao anaty tranokely karakara izay inoana fa fialofan'ireo biby.
Mbola avy any Frantsa ihany koa, manangona lahatsary antserasera ny Films 7 arakaraka ny lohahevitra manokana. Ohatra, manana andian-tantara momba ireo Mpilalao Sarimihetsika Miatrika ny Fakantsary ry zareo, izay nangatahan'izy ireo tany amin'ny bilaogeran-dahatsary hafa mba handefa ao ny horonantsarin'izy ireo ahitana vehivavy mamaky lahatsoratra eo anoloan'ny fakantsary. Mamaky lahatsoratra i olivia_gotanegre ato amin'ity ohatra manaraka ity:
Ny kandidà nifaninana farany tao amin'ny sokajin'ny Bilaogin-dahatsary ho an'ny BOBs natolotra dia i Marlene Duffy avy any Alemaina ao amin'ny Bottleplot, tranonkala iray izay nandefasany ny lahatsary iray mampiseho azy manandrana divay sy mampianatra momba ny fambolena (kolontsain'ny) divay.
Tao amin'ny tranokalan'ny BOB no nifidianan'ny olona izay bilaogera nankafiziny indrindra.
Izany eo ihany fa faly izahay manambara fa voafantina ihany koa tao anatin'ny sokajy Bilaogy Tsara Indrindra BOB ny Rising Voices iray amin'ireo tetikasa ao amin'ny Global Voices. Raha mahaliana anao izany dia jereo eto!